थोमस अल्बा एडिसन : आविष्कारको अर्को नाम
Fri, Jan 19, 2018 शुक्रवार, माघ ५, २०७४
What are you looking for...?
नरेन्द्रकुमार नगरकोटी आइतवार, पुस २३, २०७४ 1332 पटक पढिएको
‘तिमी फेल भयौ’ भनेर कसैले भनेको छ ? तिमीले चाहेजस्तो काम हुन नसकेको पनि छ ? आफूले एक चित्तले गरिरहेको काममा अभिभावक वा शिक्षकको चित्त नबुझेर काम नै छाड्नुपरेको पनि छ कि ! सम्झ त, तिमीले सुरु गरेको कुनै काममा एक दुईपल्ट सफल भएनौ भने के गर्छौ ? हिसाब गर्दा मिलेन भने तिमीहरू के गर्छौ ? कुनै परीक्षण गर्दागर्दै सामग्री नै बिग्रियो भने के गर्छौ ? अझै सोच त, के तिमी एक हजार पल्टसम्म एउटै कामलाई सफल पार्न निरन्तर लागिरहन सक्छौ र ?
आज एक जना यस्तो व्यक्ति आफ्नो कथा भन्न खोजिरहेका छन् जसले असफलताबाट कहिल्यै हार खाएनन्। अनि कहिले निरास पनि भएनन्। सुरु गरेको काम बनेन भनेर काम गर्न छाडेनन्। बरु फरकफरक तरिकाले काम गरिरहे। ती अथक व्यक्ति हुन् थोमस अल्बा एडिसन।
मेरो नाम थोमस हो। सन् १८४७ फेब्रुअरी ११ मा अमेरिकाको ओहियो सहरमा मेरो जन्म भयो। आमा न्यान्सी म्याथ्यु इलियट र बा स्यामुएल ओग्डेन एडिसनको म सातौं र कान्छो छोरो हुँ। म सानैदखि जिज्ञासु स्वभावको थिएँ। जिज्ञासु त तिमीहरू पनि छौ नि हैन त !
स्कुलमा भने मलाई ‘गोबर’ नै भन्थे। यसले केही सिक्न सक्दैन भन्थे। ढिलो काम गर्ने भएर लाटो पनि भन्थे। ज्वरो आएको कारण म कान कम सुन्ने भएको थिएँ। यसले गर्दा पनि मलाई समस्या हुन्थ्यो। स्कुल जानु मेरो लागि राम्रो भएन। त्यसैले म त्यस्तै तीन महिना जति मात्र स्कुल गएँ। मेरो अध्ययनको बाँकी जिम्मा मेरी आमाले लिनुभयो। घरमै पढ्न, लेख्न सिकेँ। गणित, विज्ञानका आधारभूत कुरा जानेँ। आमाको सहयोगमा मैले नाम चलेका लेखकका धेरै पुस्तकहरू पढेँ। कत्ति पुस्तक त आमाले पढेरै सुनाउनुहुन्थ्यो। यसरी मेरो पढाइ स्वअध्ययनमै आधारित हुन थाल्यो। धेरै पुस्तक पढ्ने बानीले मलाई ज्ञान र विज्ञानप्रति अझै नजिक बनायो।
मेरी आमा त्यस समयको उत्कृष्ट शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। मैले आमाबाट नै आजको थोमस बन्ने साथ र प्रेरणा पाएको हुँ। म आज जे छु यसको श्रेय मेरी प्यारी आमालाई जान्छ। घरमै रासायनिक प्रयोगशाला बनाउन सघाउने मेरी आमाप्रति म नतमस्तक छु। स्कुलको वातावरणमा हुर्किन कठिनाइ हुँदा आमाले साथ नदिनुभएको भए म केही गर्न सक्दिनथेँ जस्तो लाग्छ।
त्यसो त प्रतिभा भनेको मेहनतले नै खारिने हो। प्रतिभाशाली हुन एक प्रतिशत प्रेरणा र ९९ प्रतिशत परि श्रम चाहिन्छ। लगावले मानिसलाई अघि बढाउँछ। मैले पनि १२ वर्षको छँदा नै रेलमा पत्रिका बेच्ने काम गरेँ। यसबाट मैले व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर सिकेँ। मेरो रुचि वैज्ञानिक आविष्कार गर्नु थियो। मैले त्यसमा पसिना बगाएँ। यसैबाट व्यावसायिक काम अघि बढाएँ। आफ्नो रुचिलाई व्यावसायिक बनाउन सक्दा आनन्दपूर्वक काम गर्न सकिने रहेछ।
बल्ब छ नि, तपाईंहरू बिजुली बत्तीको चिम पनि भन्नुहुन्छ होला। अहिले तपाईंले ट्याक्क स्विच थिच्दा झलल्ल बल्छ। हो, त्यसको आविष्कार त हजारौं पल्टको प्रयासपछि मात्र सफल भयो। म र मेरा रिसर्च गर्ने साथीहरू मिलेर झन्डै तीन हजारवटा डिजाइन परीक्षण ग¥यौं। मैले भन्ने गरेको छु, म हजारौंपल्ट फेल भएको होइन। यो बल्बको आविष्कार हजारौं चरणको आविष्कार हो।
म दिनको चार घन्टा मात्र सुत्थेँ। कुनै परीक्षण सक्किन लागेको छ भने त ७२ घन्टासम्म पनि निरन्तर काम गर्थें। प्रायः ‘वर्कसप’मा नै १८ घन्टासम्म बिताउँथेँ। फोनोग्राफ, मोसन पिक्चर क्यामेरा, इलेक्ट्रिक बल्बलगायत मैले एक हजारभन्दा धेरै आविष्कार गर्न सकेँ। अमेरिकामा मात्र १०९३ आविष्कारको ‘पेटेन्ट’ मेरो नाममा छ। बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीमा पनि मेरो नाममा ‘पेटेन्ट’ छन्। म २१ वर्षको हुँदा मैले बनाएको भोट रेकर्डिङ मेसिनले पाएको ‘पेटेन्ट’ मेरो पहिलो सफलता थियो। मैले मेन्लो पार्कमा औद्योगिक अध्ययनका लागि पहिलो प्रयोगशाला स्थापना गरेको थिएँ। आविष्कारबाट भएको अधिकांश कमाइ मैले प्रयोगशाला बनाउन र आविष्कारकै काममा खर्च गरेँ।
भाइबहिनीहरूलाई कत्ति धेरै कथा सुनाउन मन थियो। तर आजलाई यत्ति।
थोमस अल्बा एडिसन आविष्कारको अर्को नाम हो। ‘म फेल भएको होइन, काम नलाग्ने हजार बाटाहरू पत्ता लगाएको हुँ’ भन्ने उनको १९३१ अक्टोबर १८ मा ८४ वर्षको उमेरमा निधन भयो।
आइतवार, पुस ३०, २०७४ नानीबाबुलाई माया ठकुरीको चिट्ठी
आइतवार, पुस ३०, २०७४ जाडो बिदा सुरु भयो, अब के गर्ने
आइतवार, पुस २३, २०७४ नानीबाबुलाई सत्यमोहन जोशीको चिठी
आइतवार, पुस २३, २०७४ आफूभन्दा ठूलालाई 'हजुर' भन्ने कि 'हँ' ?
आइतवार, पुस १६, २०७४ नानीबाबुलाई राष्ट्रकवि घिमिरेको चिठी
शनिवार, पुस १५, २०७४ माछालाई थप्पड हान्दै गरेको कछुवा देख्नु भएको छ ?
शुक्रवार, पुस १४, २०७४ मेगाले बाँड्यो शैक्षिक सामाग्री
आइतवार, पुस ९, २०७४ नामजस्तै काम
१८ वर्षपछि आँखाको ज्योति फर्किँदाको खुसी
देउवाको प्रश्नः बहुमतबिना सत्ता छाड भन्न लाज लाग्दैन ?
अमेरिकाले उत्तर कोरियाली क्षेत्रमा पठायो शक्तिशाली लडाकु जहाज
धनकुटामा निषेधाज्ञा जारी
प्रदेश राजधानी तोकियो : कतै दीपावली कतै आन्दोलन, कुन प्रदेशमा के भयो ?
बाक्लो हुस्सुका कारण कैलालीमा बस ठोक्किए :१९ जना घाइते
‘गुटको सल्लाहमा चले देउवा’ 1011
मापदण्ड विचार नगरी अस्थायी मुकाम र प्रमुख ताेकिए 7631
संघीयता एकातिर, दलहरू सडकतिर 1609
अझै सात लाख भूकम्प प्रभावित परिवार छानोबाहिर 590
आर्थिक सहायतामा छानबिन माग, फेरि थपियो ३४५ जनाको सूची 1370
लामा काठ नहुँदा पुनर्निर्माण ढिलो 415
लोसारको भ्रम र वास्तविकता 599
आर्थिक अनुशासनको मार्ग 375
कांग्रेसमा वस्तुगत समीक्षा 597
नेपालीको विरोधपछि सिमानामा पिलर गाड्न रोकियो 235
सचिव नहुँदा जनतालाई सास्ती 74
२३ सय लिटर अवैध घरेलु मदिरा नष्ट 148
डोटीमा आन्दोलन उग्र : सरकारी कार्यालयमा कालो झण्डा, प्रहरीको लाठी चार्जबाट दर्जनौ घाइते 528
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा दिउँसै सवारी रोकिने 298
अब किशोर अवस्था १० देखि २४ वर्षसम्म ! 371
टेलिकमको आम्दानी पाँच गुणा बढ्यो 928
चीनले बनायो हावा सफा गर्ने विश्वकै अग्लो टावर 2853
वेबबेस मोबाइल आईएमईआई दर्ता कार्यान्वयनमा लगिँदै 515
केही घण्टामै डुब्यो फेसबुकको २५ अर्ब डलर 8215
भित्रियो चिनियाँ इन्टरनेट, तोडियो भारतीय एकाधिकार 2220
१३ वर्षीय केल्भिनले बनाए ड्रोन 1878
इमेल [email protected]
© नेपाल न्युज नेटवर्क इन्टरनेसनल प्रालिद्बारा प्रकाशित | सर्वाधिकार सुरक्षित - 2018 All rights reserved. Site by: SoftNEP